लोकसेवामा कसरी लेख्ने ? विज्ञका पाँच सुझाब | Comtutor Era
लोकसेवामा कसरी लेख्ने ? विज्ञका पाँच सुझाब
ध्रुव घिमिरे सहसचिव
१. परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा गर्ने अक्सर गल्ती के – के हुन् ?
लोकसेवा आयोगको परीक्षामा थोरै सिटका लागि धेरैजना प्रतिस्पर्धीहरू सहभागी हुने भएकाले कलेजस्तरीय र अरू परीक्षाभन्दा फरक ढंगले उपस्थित हुनु जरुरी हुन्छ ।
परीक्षार्थीले लोकसेवा आयोगको परीक्षामा मुख्य रूपमा तीनवटा कुरामा गल्ती गरेको पाइन्छ । पहिलो , पर्याप्त तयारी तथा योजनाविना परीक्षार्थीहरू परीक्षा हलमा आएका हुन्छन् । पर्याप्त तयारी तथा योजनाविना परीक्षामा सामेल हुनु केवल परीक्षाको औपचारिकता निर्वाह गर्नु मात्र हो । दोस्रो , परीक्षार्थीहरू सोधिएको प्रश्नको गहिराइमा नपुगी हतारमा उत्तर लेखन कार्यमा लाग्दछन् । प्रश्नले मागेको भन्दा आफूले जानेको उत्तर लेख्नमा परीक्षार्थीहरू बढी केन्द्रित हुन्छन् । यस किसिमको लेखाइले जाँचकी र परीक्षार्थीबीच बुझाइमा फरकपना सिर्जना हुन जान्छ ।
कुनै पनि परीक्षामा जाँचकीलाई लेखाइबाट प्रभावित पार्न सकिएन भने परीक्षार्थी असफल हुनु नै हो । तेनो , परीक्षार्थीहरूले प्रभावकारी समय व्यवस्थापनमा ध्यान पुऱ्याएका हुँदैनन् । उदाहरणका लागि यदि तीन घन्टाको परीक्षामा चारवटा प्रश्न हल गर्नु छ भने अक्सर परीक्षार्थीले पहिलो प्रश्नको उत्तर लेख्दा नै एक घन्टाभन्दा बढी समय लगाएका हुन्छन् । परीक्षामा सफलता पाउन निर्धारित समय अर्थात् ४५ मिनेटको समयसीमाभित्र प्रत्येक प्रश्नको उत्तर दिनु आवश्यक हुन्छ ।
२. बढीभन्दा बढी अक ल्याउन परीक्षार्थीले कुन – कुन कुरामा ध्यान पुयाउनुपर्ला ?
बढीभन्दा बढी अंक ल्याउन परीक्षार्थीले मुख्य रूपमा पाँचवटा कुरामा ध्यान पुऱ्याउनुपर्छ । पहिलो , योजनाबद्ध अध्ययन र विषयवस्तुको बुझाइमा ध्यान दिनुपर्छ । अध्ययन गर्दा सकेसम्म आधिकारिक स्रोत सामग्रीमा ध्यान दिनुपर्छ । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित ख्यातिप्राप्त लेखकका पुस्तकहरू , राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक लेख रचना , विज्ञ व्यक्तिहरूसँगको निरन्तर सम्पर्क तथा अन्तक्रिया परीक्षामा सफलता हासिल गर्ने मुख्य सूत्रहरू हुन् । दोस्रो , विगतमा सोधिएका प्रश्नहरूको पर्याप्त अभ्यास गरेर मात्र परीक्षामा सामेल भएको अवस्थामा लेखाइ परिपक्व र बढी कन्भिसिङ हुन्छ । तेस्रो , परीक्षामा उपस्थित हुँदा रिल्याक्स र कुल माइन्डमा जानु आवश्यक हुन्छ । खानपिन , सुताइ , शारीरिक तथा मानसिक सन्तुलनमा विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्छ । परीक्षाको अघिल्लो दिन परीक्षार्थी रातभर अध्ययन गरेर परीक्षा हलमा पुगेको खण्डमा उत्तरपुस्तिकामा लेख्ने समयमा परीक्षार्थी शारीरिक तथा मानसिक रूपमा कम सक्रिय हुन सक्छ । चौथो , प्रश्नले मागेको क्षेत्रमा मात्र उत्तर केन्द्रित गर्नुपर्छ । लेख्दा ‘ भ्यालु एड ‘ गर्ने र आवश्यक कुरा मात्र लेख्नुपर्छ । अनावश्यक गन्थन र लामो भूमिका लेखनमा अलमलिनुहुँदैन । पर्याप्त उदाहरण र राष्ट्रिय – अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेट्नुपर्छ । पाँचौं , लेखाइ निश्चित स्ट्रक्चरमा लेख्दा उपयोगी हुन्छ । उत्तरको सुरुवात र निष्कर्ष जाँचकीको मन जित्ने किसिमको हुनुपर्छ । बीचको भागमा पनि प्रश्नको मागअनुसार सिलसिलेवार , आकर्षक र सरल रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
३. जाँचकीले कस्तो उत्तरको अपेक्षा गर्छ ।
जाँचकीले परिपक्व , सिर्जनशीलर समालोचनात्मक उत्तरको अपेक्षा राख्दछ । लेखाइबाट नै जाँचकीले परीक्षार्थीको अध्ययनको स्तर तथा विषयवस्तुको ज्ञानको विषयमा बुझ्ने मौका पाउँछ । परिमाणात्मकभन्दा गुणात्मक लेखाइलाई प्रोत्साहन गर्दछ । सारमा भन्दा जाँचकीले सरल , सिलसिलेवार , तथ्यमूलक , प्रमाणमा आधारित र पर्याप्त अध्ययन तथा विश्लेषणसहितको उत्तरको अपेक्षा गर्दछ ।
४. परीक्षा हलमा छिरेपछि परीक्षार्थीले के के कुरामा ध्यान दिनपर्छ ?
परीक्षा हलमा छिरेपछि परीक्षार्थीले मुख्य रूपमा तीनवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । पहिलो , ‘ कन्फिडेन्स लेभल ‘ बलियो हुनुपर्छ । बलियो आत्मविश्वास नै परीक्षामा सफलता प्राप्त गर्ने पहिलो कडी हो । आफू अरू प्रतिस्पर्धीभन्दा कमजोर छु भन्ने धारणा किञ्चित् मनमा लिनु हुँदैन । दोस्रो , प्रश्नलाई राम्रोसँग बुझेर मात्र उत्तरको सुरुवात गर्नुपर्छ । प्रश्नको पर्याप्त बुझाइविना सुरु गरिएको उत्तर सुरुदेखि नै फितलो हुँदै जान्छ । तसर्थ सुरुवातदेखि नै बुझाइको स्तर , उत्तरको ढाँचा र लेखाइको निखारपनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । तेस्रो , परीक्षा हलमा बसिसकेपछि आन्तरिक र बाह्य कुनै वातावरणले प्रभावित हुनु हुँदैन । उदाहरणका लागि परीक्षा हलनजिक सवारी गुड्ने सडक भएमा सवारीको कोलाहल आउन सक्छ । परीक्षा हलभित्र पनि अरू परीक्षार्थीले अनावश्यक रूपमा हल्ला गर्न सक्दछन् । वा अन्य कुनै अनपेक्षित अवस्था आउन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा कुनै हालतमा विचलित नभई आफ्नो लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुनु ( परीक्षार्थीका लागि हितकर हुन्छ ।
५.लोकसेवाको तयारी कसरी गर्दा उपयुक्त हुन्छ ?
लोकसेवाको तयारी गर्दा सुरुवातदेखि नै सकारात्मक सोच र दृष्टिकोणका साथ उपस्थित हुनु उपयुक्त हुन्छ । म गर्न सक्छु भन्ने भावना अन्तर्मनबाट आउनुपर्छ । आधिकारिक र खोजमूलक सामग्री अध्ययनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । विज्ञसँगको छलफल , सहकर्मीसँगको सामूहिक अध्ययन र निरन्तरको अभ्यास नै लोकसेवामा सफलता पाउने मन्त्रहरू हुन् । एक – दुईपटक असफल हुँदैमा सक्दिनँ भन्ने धारणा राख्नु हुँदैन । निरन्तरको प्रयासले पक्कै पनि सफलता हासिल गर्न सकिन्छ ।
Tags: 20 Best Ways To Prepare For Exams of Lok Sewa Aayog, how to learn loksewa, how to read loksewa, Lok Sewa Aayog exam preparation questions answer, Lok Sewa Aayog Exam-Preparation, lok sewa aayog question bank, lok sewa aayog vacancy 2076, lok sewa for bank, Lok Sewa Nepal: Best App For Lok Sewa Exam Preparation, lok sewa question answer, lok sewa tayari class in ktm, loksewa exam format, Loksewa Exam Preparation लोकसेवा तयारी, Nepali Loksewa Exam Tayari, Prepare for Lok Sewa Exams taken by Lok Sewa Aayog, Successful Tips to Pass in Loksewa Examination
Previous लाेकसेवा आयाेग संक्षिप्त परिचय
Next प्रदेश तथा स्थानीय तहका चौथो तहका विभिन्न पदहरूको विज्ञापन सम्बन्धी सूचना